Adigaaga ka soo qaxay dagaalka ka jira Yuukrayn | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Adigaaga ka soo qaxay dagaalka ka jira Yuukrayn
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 3 5 2022
Halkan waxaa ku jirta warbixin loogu talogalay adigaaga ka soo qaxay dagaalka ka jira Yuukrayn. Dhowr qaybood oo ka mid ah boggan intarnatka waxaa lagu turjumi doonaa afka Yuukrayn wakhti dhow.
Adigaaga yimi Iswidhan ee ka yimi Yuukrayn waxaad joogi kartaa ilaa 90 maalmood bilaa fiiso haddii aad haysato baasaboor ah biyoomatarig. Si aad u shaqeyso oo carruurtaaduna u dhigtaan iskoolka waxaad u baahantahay inaad sharci degganaansho ka codsato Hey’adda Socdaalka.
Codso gabood sida waafaqsan xeerka qaxootiga badan
Adigaaga ka soo qaxay dagaalka Yuukrayn waxaad xaq u yeelan kartaa sharci degganaansho oo leh gabood ku meel gaar ah gudaha Iswiidhan sida waafaqsan Midowga Yurub xeerkeeda qaxootiga badan.
Hey’adda Socdaalka boggeeda intarnatka waxaad ka akhrin kartaa dheeraad ku saabsan qofka codsan kara sharci degganaansho oo ku meel gaar ah sida waafaqsan xeerka qaxootiga badan. Waxaad xitaa akhrin kartaa sida aad samaynayso si aad u codsato iyo waxa dhaca ka dib go’aanka.
Akhri dheeraad ku saabsan in la codsado gaboodka waafaqsan xeerka qaxootiga badan kuna qoran Hey’adda Socdaalka boggeeda intarnatka.
Haddii aad heshay sharci degganaansho sida waafaqsan xeerka qaxootiga badan
Xeerka qaxootiga badan wuxuu bixinayaa xaqa:
goob hoy dhinaca Hey’adda Socdaalka (adigu ma dooran kartid meesha)
daryeel caafimaad oo aan la sugi karin
taageero dhaqaale oo cayiman
in laga shaqeeyo gudaha Iswiidhan.
Akhri dheeraad ku saabsan waxa dhacaya marka aad hesho sharci degganaansho kuna qoran Hey’adda Socdaalka boggeeda intarnatka.
Hoyga gudaha Iswiidhan
Adiga ayaa keligaa diyaarsan karo hoy ama caawimaad dhinaca hoyga ah ayaad ka heli kartaa Hey’adda Socdaalka. Haddii aad doorato inaad keligaa diyaarsato hoy waa inaad kirada iska bixisaa. Xusuuso in aad wargeliso Hey’adda Socdaalka cinwaankaaga haddii keligaa aad diyaarsato hoy.
Fiiro gaar ah u yeelo in Hey’adda Socdaalku ay leedahay liistada xaafado leh xaalado adag dhinaca bulsho iyo dhaqaale ahaan. Qofka doorta inuu ku noolaado xaafad noocaas ah wuxuu waayi karaa xaqa taageero dhaqaale oo laga helo Hey’adda Socdaalka. Hey’adda Socdaalka boggeeda intarnatka waxaad ka ogaan kartaa haddii cinwaanka aad doonaysid inaad u guurto uu ku yaallo xaafad raad ku yeelan karta xaqa dhaqaale laga helo Hey’adda Socdaalka.
Akhri dheeraad ku saabsan hoyga kuna qoran Hey’adda Socdaalka boggeeda intarnatka.
Haddii aad haysato xayawaan rabaayad ah oo aad kala timi Yuukrayn
Haddii aad wadato ey, bisad ama xayawaan kale oo rabaayad ah oo aad kala timi Yuukrayn waa inaad taas wargelisaa shaqaalaha kastamka ee xuduudka dhinaca Iswiidhan. Haddii xayawaankaaga aan lagu baarin xuduudka waa inaad la xiriirto dhakhtarka xayawaanka sida ugu dhakhso badan ee suurtagal ah. Waa muhiim in ka hor lala xiriiro dhakhtarka xayawaanka, maadaama xayawaankan aan la oggolayn inuu u dhowaado xayawaanka kale ama dadka booqanaya isbitaalka xayawaanka.
Dheeraad ku saabsan xayawaanka rabaayadda ah ee ka yimi Yuukrayn ka akhri Hey’adda beeraha boggeeda intarnatka.
Dadka waaweyn ee haysta sharci waafaqsan xeerka qaxootiga badan waxay xaq u leeyihiin daryeelka bukaanka ee deg-degga ah, daryeel ilko oo deg-deg ah iyo daryeelka caafimaad ee aan la sugi karin. Waa shaqaalaha caafimaadka kuwa go’aaminaya nooca daryeel caafimaad ee aan la sugi karin. Adigu waxaad xitaa xaq u leedahay daryeelka ummulidda, daryeel xilliga iska soo ridid ilmo, talooyinka waxyaabaha loo adeegsado ka hortaga uuraysiga, daryeelka caafimaadka hooyada iyo daryeel waafaqsan sharciga ilaalinta cudurada la kala qaado (sharci ay tahay inuu ka hortago cudurada la kala qaado ee faafa). Si aad u hesho daryeelkaas waa inaad marka hore iska diiwaangeliso Hey’adda Socdaalka. Tani ayaa khuseysa carruurta iyo dadka waaweyn labadaba. Markaas ayaad helaysaa xitaa in lagugu casuumo baaritaan caafimaad.
Haddii aad xanuusato, dhaawacanto ama dareemayso caafimaad daro nafsiyan ah waa inaad bilowdaa inaad la xiriirto rug caafimaad. Haddii shaki kaaga jiro marka ay tahay inaad raadsato daryeel waxaad mar kastaba Hagida daryeelka ka wici kartaa 1177. Telafoon lamabrku waa +46 771 1177 00. Haddii ay jirto xaalad degdeg ah iyo khatar ku timi qof naftiisa waa inaad wacdo 112.
Talaalka ka hortaga covid-19
Dadka jooga Iswiidhan oo dhan ee ah 12 jir ama ka weyn waxay heli karaan tallaalka ka hortaga covid-19. Tallaalka ka hortaga covid-19 waa bilaash waana wax qofku iskii u doorto.
Boggag leh warbixino dheeraad ah
Dheeraad ku saabsan daryeelka caafimaadka ka akhriso bogga internetka ee 1177 Vårdguiden. Akhriso dheeraad ku saabsan tallaalka ka hortaga covid-19 kuna qoran bogga intarnatka ee 1177 Vårdguiden. Dheeraad ku saabsan sida aad u heli karto caawimaad haddii ay kugu soo dhaceen dhacdooyin naxdin leh ka akhri bogga intarnatka ee 1177 Hagida Daryeelka. Wixii dheeraad ah ee ku saabsan caafimaadka iyo daryeelka bukaanka ka akhri Informationsverige.se.
Haddii ilmahaagu u baahanyahay daryeel
Caruurta iyo dhalinyarada ka yar 18 jir waxay xaq u leeyihiin daryeel caafimaad iyo daryeelka ilkaha oo lamid ah sida ay helaan caruurta kale ee ku nool Iswiidhan. Daryeelka caafimaadka badanaaba bilaash ayuu u yahay carruurta, laakiin way kala duwanaan kartaa iyadoo ku xiran halka qofku degganyahay.
Carruurtu xitaa waxay xaq u leeyihiin tallaalka ka hortaga cudurada carruurta ee la kala qaado badankooda.
Dheeraad ku saabsan daryeelka caafimaadka ka akhriso bogga internetka ee 1177 Vårdguiden.
Wixii dheeraad ah ee ku saabsan caafimaadka ka akhri Informationsverige.se.
Haddii aanad haysan wax lacag gaar kuu ah waxaad taageero dhaqaale ka codsan kartaa Hey’adda Socdaalka. Lacagta aad ka hesho Hey’adda Socdaalka waa inay ku filnaato raashinka, dharka iyo kharashyada qofka gaarka u ah.
Waxaad codsan kartaa taageero dhaqaale marka aad booqato Hey’adda Socdaalka ama in aad foomka codsiga dhinaca boosta ugu dirto Hey’adda Socdaalka.
Dheeraad ku saabsan tageerada dhaqaale ka akhri bogga intarnatka ee Hey’adda Socdaalka.
Dugsiga xanaanada iyo iskoolka carruurta
Carruurta iyo dhalinyarada heshay sharciga degganaansho ee ah gaboodka ku meel gaarka ah waxay xaq u leeyihiin inay dhigtaa dugsiga xanaanada iyo iskoolka. Iskoolku waa bilaash. La xiriir degmada aad ku nooshahay oo u sheeg inaad doonayso in carruurtaadu dhigtaan dugsiga xanaanada ama iskool.
Dheeraad ku saabsan nidaamka iskoolka Iswiidhishka ka akhri Hey’adda Waxbarashada boggeeda intarnatka ee Utbildningsguiden.
Dheeraad ku saabsan nidaamka iskoolka Iswiidhishka ka akhri Informationsverige.se.
Ka shaqaynta gudaha Iswiidhan
Xafiiska Shaqada boggeeda intarnatka waxaad ka helaysaa warbixin ku saabsan waxa ansaxa ah haddii aad shaqo ka raadinayso gudaha Iswiidhan.
Haddii aad heshay sharci degganaansho ku heshay xeerka qaxoontiga badan oo aad haysato shaqo waxa aad tusaale ahaan xaq u yeellan kartaa lacagta bukaanka haddii aad xanuusato oo aanad shaqayn karin. Waxaad lacagta bukaanka ka codsanaysaa Qasnadda Caymiska.
Dheeraad ku saabsan in la raadiyo shaqo ka akhri Xafiiska Shaqada boggeeda intarnatka. Läs mer på Skatteverkets webbplats om att arbeta och betala skatt i Sverige. Dheeraad ku saabsan noocyada lacagaha aad xaq u yeellan karto marka aad shaqayso ka akhri Qasnadda Caymiska boggeeda intarnatka. Dheeraad ku saabsan in la raadiyo shaqo ka akhri Informationsverige.se.
Haddii aad haysato waxbarasho dalka dibediisa ah
Haddii aad haysato waxbarasho dalka dibediisa ah waxaad heli kartaa qiimeynta waxbarashadaadi hore si loo ogaado waxa ay u dhiganto gudaha Iswiidhan. Tani waxay ku caawin kartaa marka aad tusaale ahaan codsanayso shaqo ama wax ka baranayso gudaha Iswiidhan. Waa Guddida Jaamicadaha sare iyo jaamicadaha kuwa sameeya qiimeyntan.
Dheeraad ku saabsan qiimeynta waxbarashada dalka dibediisa ka akhri Guddida Jaamicadaha sare iyo jaamicadaha (UHR) boggeeda intarnatka.
Dheeraad ku saabsan qiimeynta waxbarasho dalka dibediisa ah ka akhri Informationsverige.se.
Hawlaha ka jira meesha aad ku nooshahay
Waxaa jira hawlo kala duwan looguna talogalay adigaaga ku cusub Iswiidhan. Degmooyinka iyo ururadu waxay hayaan hawlo kuwaas oo aad ku baran karto dad cusub kuna tababaranayso afka Iswiidhishka. Waxaa hawlo kuwaas oo aad wax dheeraad ah kaga ogaan karto bulshada Iswiidhishka iyo suuqa shaqada. Waxa jira xitaa hawlo kala duwan oo ku saabsan in la sii fiicnaysiiyo caafimaadka.
La xiriir degmadaada ama ka raadi boggooda intarnetka si aad u aragto nooca hawlaha laga helayo degmadaada.
Baro af Iswiidhishka
Informationsverige.se waxaa laga helayaa barnaamijka dijitaalka ee luqadda "Lära svenska". Halkaas ayaad keligaa ku tababaran kaftaa af Iwiidhishka. Waxaa ku jira leyliyo iyo filimo. Waa bilaash oo way sahlan tahay in la isticmaalo.
Akhri dheeraad ku saabsan "Lära svenska" kuna qoran Informationsverige.se.
Haddii ay ku soo gaartay rabshad dagaal ama ka ganacsiga dadka
Marka dadku qaxayaan waxaa jiri kara dad iska dhiga inay wax caawinayaan laakiin doonaya inay ka fa’iidaystaan xaaladdan. Waxaa jiri karta khatar ah ka ganacsiga dadka iyo noocyo kale oo xadgudub ah.
Ka fikir taas haddii qof kugu casuumo inuu kuu diyaarinayo safar, guri ama shaqo:
Marnaba ha dhiibin baasaboorkaaga, dukumentiga kale ee muhiimka ah ama telafoonkaaga.
Dadka ku caawinaya ka codso inay ku tusaan aqoonsigooda.
Hubso in aad hesho warbixin ku saabsan meesha loo safrayo iyo macluumaadka halka lagala xiriirayo kuwa mas’uulka ka ah inay diyaariyaan safarada. Qoro wixii aad ogaato.
Qof aad ku kalsoon tahay u sheeg halka aad joogto, halka aad ku socota iyo qofka aad la safrayso.
Waxa aad xaq u leedahay mushahaaro haddii aad ka shaqayso gudaha Iswiidhan. Ha aqbaal wax ah casuumad ah in aad u shaqayso si aad u hesho meel aad ku noolaato, cunto ama alaab kale.
La xiriir hey’addaha dawladeed ee Iswiidhishka. Iska diiwaan geli Hey’adda Socdaalka.
Haddii adiga ama qof aad garanayso ay soo gaarto dhib ah rabshad dagaal waxaa jirta caawimaad la helo. Wixi dembi ah wargeli ama u sheeg booliiska iyadoo la wacayo +46 77-114 14 00. Wac 112 haddii ay jirto xaalad deg-deg ah.
Haddii adiga ama qof aad garanayso ay soo gaarto dhib ah hanjabaad iyo rabshad dagaal waxaad wici kartaa Khadka caawinta haweenka dhibaataysan. Khadka haweenka dhibaataysan wuu furanyahay mar walba. Waa bilaash in la waco. Adigu ma u baahnid inaad sheegto magacaaga marka aad wacdo. Telafoon lambarku waa +46 20-50 50 50. Khadka caawinta haweenka dhibaateysan waxay haystaan turjubaano u turjuma luqaddaha badankooda.
Akhri dheeraad ku saabsan ka ganacsiga dadka kuna qoran Hey’adda Sinaanta boggeeda intarnatka.
Warbixn lagu turjumay af Yuukrayn kuna qoran Informationsverige.se
Fiiro gaar ah u yeelo in qaybo ka mid ah warbixinta dhowr ka mid ah boggagan ay tahay mid guud. Tani micnaheedu waa in laga yaabee aanay ku khuseyn warbixnaha oo dhan adigaaga helay sharciga degganaanshaha ee waafaqsan xeerka qaxoontiga badan.
Haddii aad leedahay waxbarasho dalka dibediisa ah In la raadiyo shaqo In cid loo shaqeeyo Baro iswiidhish Carruurta xuquuqdooda iyo Heshiiska Xuquuqda Carruurta In si sax ah wax loo helo dhanka daryeelka caafimaadka Waa muhiim inaynu ka fikirno cidda ka dambeysa war Waa maxay caafimaad? Sidee ayaa dadku u degganyahay? Muxuu sameeyaa adeegga arrimaha bulshada? Haddii qoysku u baahdo taageero